Dia mampiaraka ny Toro-hevitra: ny Tanora ny olona iray - ny zokiny vehivavy
Dia mampiaraka ny Toro-hevitra: ny Tanora ny olona iray — ny zokiny vehivavy
Izy io dia tsy fahita firy ny nahita ny tanora lehilahy sy ny vehivavy zokiolona daty sy efa tena mafy ny firaisana ara-nofo sy ny tantaram-pitiavana fifandraisana, izay mihantsy ny nentim-paharazana ny lehilahy zokiolona, tanora vehivavy iray nanangana fa isika dia ampiasaina mba nahita.
Voalohany, ny zava-misy fa toy izany mampiaraka zava-misy dia mbola fady izany no mahatonga ny rehetra ny toa marina kokoa sy mampientam-po. Maro tanora ry zalahy dia entin’ny vehivavy izay taona noho izy ireo na mihoatra, araka ireo vehivavy ireo dia matetika matoky kokoa sy kokoa ny firaisana ara-nofo noroahina sy ny mpankafy noho ny amin’ny vehivavy tanora kokoa. Ireo tanora ry zalahy dia samy liana sy mientanentana momba ny mampiaraka ny vehivavy iray, dia tsy menatra izay tiany firaisana ara-nofo, tsy toy ny tanora tovovavy ny faha-izay matetika no sahiran-tsaina momba fotsiny ny zava-drehetra, ao anatin’izany ny tantaram-pitiavana sy faniriana ara-nofo. Fa ny fifandraisana eo amin’ny tanora lehilahy sy ny vehivavy anti-panahy dia mety ho supercharged amin’ny fitambaran’ireo tanora lehilahy s fara tampony firaisana ara-nofo fiara sy ny vehivavy anti-panahy s fahatokiana, ny traikefa sy ny firaisana ara-nofo fiara. Misy ny sasany mavesa-danja hafa ny antony mahatonga ny vehivavy anti-panahy dia mahasarika kokoa ny tanora ry zalahy. Ary mazava ho azy, ny s tsy zava-miafina izany fa ny vehivavy eo amin’ny thirties ary forties efa ambony be ny firaisana ara-nofo mpamily noho ireo ny faha-roapolo taonany. Izay ambony kokoa ny firaisana ara-nofo fiara mandika, ankoatra ny zavatra hafa, ho bebe kokoa mivantana amin’ny olona. Ny matotra kokoa ny vehivavy dia mety ho liana tao niaraka ny tanora lehilahy avy naripaka daholo ny sarangan’olona te hahafanta-javatra izay dia mahatsapa toy ny fiarahana amin’ny olona iray ny tanora, ary satria koa matetika ry zalahy tanora kokoa ny mailaka, mavitrika, mavitrika.
Ny maha-manerana ny tanora lehilahy mahatonga ny vehivavy tanora hahatsapa koa
Tsy misy vehivavy tia lehilahy iray izay nisy farafara ovy na iza dia afaka mianika napetraka ny tohatra tsy ho avy ny aina, indrindra fa raha ny vehivavy ny tenany dia tena mavitrika. Tanora ry zalahy manana fananahana matanjaka kokoa fiara ary dia mazava ho hungrier ho an’ny vehivavy s vatana. Zavatra vitsivitsy kokoa mandrobo ny vehivavy anti-panahy noho ny miaraka amin’ny tanora lehilahy izay te hihinana ny vatany ary izay no mihoatra te ho akaiky azy ara-batana noho ny lehilahy be taona. Matetika, ny tanora lehilahy sy ny vehivavy anti-panahy dia manapa-kevitra upfront fa ny fifandraisana dia ho tsotsotra, ary izy ireo dia tsy tokony hanantena misy fanoloran-tena avy amin’ny tsirairay, satria fantany fa ny fiafaran izay dia tsy azo ihodivirana ny fifandraisana noho ny toa irreconcilable faha-samy hafa. Maneso na izany aza, ny tena zava-misy fa ny olona roa hanala ny fanerena ny fanoloran-tena avy amin’ny fifandraisana mampitombo ny mahasarika ara-nofo sy ny filan’ny nofo amin’ny samy hafa sy ny faniriana mba ho amin’ny tsirairay, satria ny fifandraisana dia tsy clouded amin’ny tahotra sy ny fahasarotana ny fanoloran-tena, ny fifandraisana maharitra sy ny olana mifandray. Vokatr’izany nitombo tantaram-pitiavana fitiavana sy ny firaisana ara-nofo fifandraisana, ny olona roa ireo raha ny marina kokoa mba hampitombo ny fihetseham-po mahery vaika ho an’ny tsirairay sy ny mba mahatsiaro ho tena tia samy hafa ny zavatra tsy nomanina ho azy, fa koa ny zavatra izay mitranga matetika ary dia toy izany mihoatra lavitra noho ny fanaraha-maso. Ity no lehibe noho izany dia tsotra ny azo atao ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy efa lehibe ny fotoana miaraka amin’ny hafa, tia manokana ny firaisana ara-nofo fifandraisana nandritra ny fotoana lava be ary tsy hanana ny fihetseham-po ho an’ny tsirairay. Misy ihany koa ny manan-danja hafa ny antony mahatonga ny tanora lehilahy mety indrindra fa tia mampiaraka ny vehivavy anti-panahy. Noho izany, inona no tokony vehivavy no tokony tsy izy no nanomboka niaraka ny tanora lehilahy ao ny toerana voalohany. Tokony izy no hanapaka azy raha vao tsapany fa izy dia mitombo ny fihetseham-po ho an’ny lehilahy. Na ny tokony ho izy mbola nahita ny lehilahy, mankafy ny fiarahana aminy toy ny tena izy dia ho afaka izy raha afaka, ary tsy manahy momba ny vokatry ny toe-javatra be loatra, tsy mieritreritra ny hoavy be loatra. I don t mieritreritra fa misy vehivavy afaka mahita tanteraka sy mazava valin’io fanontaniana io, ary raha ny tena marina aza t mino fa izany valim-misy, toy izany fa miankina be amin’io manokana vehivavy s tanjona sy ny zavatra ilaina amin’ny fa fotoana manokana eo amin’ny fiainany. Ny vehivavy anti-panahy dia mety manana ny lehibe indrindra ny fotoana ny fiainany mampiaraka ny mavitrika, mahaliana, manintona ireo tanora lehilahy, fa izy koa dia mety hahatsapa fa izy no mandany ny fotoanany ho amin’ny tanora lehilahy sy ny fahafantarana fa dia tsy handeha hiverina ho fifandraisana maharitra, fa tsy mikatsaka ny fifandraisana amin’ny olona izy izay afaka hanorina fianakaviana iray ary nanan-janaka ao ny akaiky indrindra ho avy araka ny toe-batan’ny no hibaiko ny vehivavy iray izay mahafantatra fa ny niteraka famantaranandro dia ticking.
Nefa avy eo indray tsy ny vehivavy rehetra te-fianakaviana sy ny ankizy
Azo antoka fa, ny fanoloran-tena, ny fianakaviana sy ny ankizy ny zavatra farany eo ireo vehivavy s an-tsaina izay nahatsapa nanempotra ny talohan’ny fifandraisana, na ny fanambadiana, dia nandeha namaky ny sarotra ny fisaraham-panambadiana na ny maharary fiatoana-ny, sy izay mahatsapa fa ny faniriana ny ho tia sy hankalaza ny vao hita ny fahalalahana. Farany, tsy misy afaka tsy miangatra manoro hevitra ny vehivavy iray raha toa izy dia tokony daty tanora ny lehilahy, satria izy irery ihany no mahalala hoe inona ny tanjona dia, ary izy irery ihany no mahatsapa ny filàna sy ny faniriantsika dia amin’ny fa sehatra manokana eo amin’ny fiainany ny fandinihana ny toe-javatra tsy manam-paharoa ny hanolotra ny toe-pihetseham-po sy ny fiarahana taloha. Mafy ara-batana raharaha mety fotsiny ho zavatra ilainy ny mankafy ny fiainana, ary mba ho variana amin’ny azy teo aloha fiatoana-ny na ny fahadisoam-panantenana eo amin’ny olona. Ny olona sasany dia manolo-tena ny hiaina fotoana rehetra ny fomba feno sy hanao izay azony atao izy ireo mba hahazo ny zavatra izy ireo raha mbola manana izany. Ny vehivavy izay mpikambana fa sokajy tokony ho tia ny fifandraisana amin’ny lehilahy tanora sy ny tombontsoa sy ny thrills, raha manaiky fa izany dia mety ho mihoatra noho ny tsy misy tsiny. Ny hafa mihevitra ny ambony fomba fiainana ho tsy mandray andraikitra na tsy voahevitra, ka mahatsapa kokoa ny aina mihevitra ny fiainana ho avy, anisan’izany ny fitiavana ny fiainana. Ny vehivavy izay isan ity sokajy ity dia tsy ny ho sambatra ny hifikitra manodidina ny lehilahy, raha toa fantatra mialoha fa tsy handeha na aiza na aiza sy efa tsy misy mety ny miverina ho any an-tena ny fiaraha-miasa. Ianao ihany no mahalala izay sokajy ity dia isan ‘na izay category te-ho isan’ ny, ary indray mandeha ianao dia mamaritra izay fomba fiasa mifanaraka amin’ny fiainako filozofia, dia azo inoana fa hanao ny safidy tsara ho an’ny tenanao nomena ny toe-javatra tsy manam-paharoa, ary koa ny zavatra ilainao sy tianao tamin’izany fotoana manokana eo amin’ny fiainana
← Chat tsy misy fisoratana anarana
No nanatevin-daharana ny mampiaraka toerana be mpampiasa indrindra any Italia Scopamici →